Uhuru Kenyatta oo ka fekeraya inuu ceyriyo Wasiirkiisa Arrimaha Dibbada Monica Juma | Sagal Radio Services
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Uhuru Kenyatta uusan ku faraxsanayn sida ay haweeneydan u hogaamiso siyaasada arrimaha dibadda dalka Kenya iyadoo gaar ahaan uu Uhuru Kenyatta dhibsaday dib u dhaca ugaga imanaya khilaafka badda ee Soomaaliya kala dhexeeya.
Sida ay u sheegeen dad ku dhow dhow Madaxtooyada dalka Kenya wargeys ka soo baxa magaalada Nairobi Uhuru Kenyatta ayaa dhaliilsan hab dhaqanka wasiirkiisa Arrimaha Dibbada Monica Juma.
“Madaxweyne Kenyatta kuma faraxsana sida wasaarada arrimaha dibbada dowladiisa ay arrinta qodaxda ku noqotay ee khilaafka badda Soomaaliya ay ula tacaalayso.”ayuu yiri mid kamid ah dadka ku dhow dhow xafiiska Madaxweyne Kenyatta.
Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ ayaa Khamiistii waxa ay oggolaatay inay dib u dhigto dhagaysiga dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya.
Dhagaysiga dacwada oo markii hore ahayd in la bilaabo bishan sagaalkeeda ayaa dib loogu dhigey illaa 4ta bisha November ee sanadkan.
Dowlada Kenya ayaa sheegtay in ay bedeleyso wakiiladii dacwada badda kuwaasoo ka soo kala jeeda dalal kale duwan.
Wakiilada dacwada ee dowlada Kenya u xilsaartay arrimaha khilaafka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya ayaa waxaa ay kala ahaayeen Prof Payam Akhavan oo u dhashay dalka Maraykanka,Prof Alan Boyle oo British ah, Prof Mathias Forteau oo Faransiis ah, Mr Karim Khan oo British ah iyo Ms Amy Sanders oo British ah.
Wararka ayaa waxa kale oo ay sheegayaan in Monic Juma oo wax ku soo baratay dalka Britain lagu dhaliilayo arrimo kale kuwaasoo sababay in Madaxweyne Kenyatta ka fekero inuu shaqada ka eryo.